Gabadh uurleh oo ka Badbaadday Jar dheer oo Ninkeedu ka Tuuray. – Horn Cable Tv
0	June 20, 2019 12:20 pm
Puntland : Maxamed Cabdi Barre oo Shaaciyay Murashaxnimo.
Thailand(HCTV) Wang Nan,oo ah haweenay 32 jir ayaa ka samato baxday kadib markii ay kasoo dhacday jar dheer oo joogiisu yahay 110 feet oo ku yaala goob dalxiis oo ka mid ah Magaalada Ubon Ratchathani ee wadanka Thailand.
Wang leh uur 3 bilood ah ayaa iyada iyo ilmaha ay caloosha ku sidaaba ay geeri ka badbaadeen, balse dhaawacyo ayaa soo gaadhay haweenaydan.
Ciidamada Booliska ee ka shaqeeya goob dalxiis ee falkani ka dhacay ayaa arkay haweenay dhulka taala, waxaana ula career cisbitaalka halkaasi oo ugu dambayn la sheegay inay iyada ilmaha ay caloosha ku siddaaba ay xaaladdu fiican tahay.
Wang Nan,ayaa markii hore booliska u sheegtay inay kasoo dhacday buurta balse mar dambe ayay ciidanka u sheegtay in saygeeda oo lagu magacaabo Yu Xiaodong, 33 jir ah, uu kasoo tuuray meesha dheer ee ay kasoo dhacday. iyadoo ku sababaysay inuu doonayay dhaxalka hantideeda oo lagu qiyaasay $2.5 Milyan oo doolar, si uu isaga bixiyo dayn aad u badan oo lagu leeyahay.
qof tarumaan ah ayaa maqlay Wang oo ninkeeda ku leh “Maxaad sidaas iigu samaysay?” taasi oo shaki ku abuurtay masuuliyiinta thialand.balse markii dambe waxay sheegtay inay ka cabsanaysay saygeeda oo ugu hanjabay hadii ay ciidanka u sheegto inuu dili doono.
Xiaodong, ayaa ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen kadib markii uu cisbitaalka kusoo booqday xaaskiisa.
lamaanahan oo u dhashay dalka shiinaha gaar ahaan gobolka Jiangsu province, ayaa thailand u jooga arrimo ganacsi waxaana ay isu raaceen goob dalxiis oo ay ku taala goobta uu ninka Daynta badan lagu leeyahay uu ka tuuray xaaskiisa uurka leh.